[MMAnime] TrueTears : TrueTears
Type: TV Episodes: 13 Status: Finished Airing Aired: Jan 6, 2008 to Mar 30, 2008 Premiered: Winter 2008 Broadcast: Sundays at 01:00 (JST) Producers: Bandai Visual, Lantis Licensors: Bandai Entertainment, Discotek Media, Bandai Visual USA Studios: P.A. Works Source: Original Genres: Drama, Romance, School Duration: 24 min. per ep. Rating: PG-13 - Teens 13 or older Review - ကိစ္စအမျိုးမျိုးကြောင့် Crush နဲ့ တစ်အိမ်တည်းအတူတူနေနေရတဲ့ Shinichiro ။ ကျောင်းမှာနဲ့ မတူဘဲ အိမ်မှာဆို အေးတိအေးစက်ဖြစ်နေတဲ့ သူ့ရဲ့ Crush ဝမ်းနည်းမှုတွေကို သူစိတ်ဝင်စားတဲ့ ပန်းချီပညာနဲ့ ဖြေဖျောက်ပေးဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ဆိုပေမဲ့လည်း အိမ်မှာတောင် စကားက သိပ်မပြောဖြစ်။ အဲ့လိုမျိုး ကွိုင်တက်နေတဲ့ သူဟာ တစ်နေ့မှာ သစ်ပင်ပေါ်တက်ပြီး ပြန်မဆင်းတတ်တော့တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်ဆုံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း သူ့ရဲ့ အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝကို ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲ ဆိုတာကို ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်